ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
3. မော်တော်: AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator turn အထူးအပူကျော်ထံမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်မြင့်မားစတင် torque နှင့်အပူကာကွယ်တပ်ဆင်ထားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်လုပ်ဖို့ induction motor ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
4. Window: AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတပုံများအတွက် Polycarbonate ဝင်းဒိုးကို built-in O-ကွင်း, fixed သတ္တုဂလင်းလျှပ်စစ် actuator, turn, အဂလင်းကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူ, ရေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ခုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။
AOX တစ်ခုသာအစိုင်အခဲ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အမျှအချို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကိုကူညီခဲ့စနစ်များ, တည်စေပြီ။ CNC စက်စင်တာနှင့်အတူတစ်ဦးကတိစက်ပလက်ဖောင်းအဓိကတည်တတ်၏အဖြစ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကိုပိုမို reailable AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတစ်ပုံကိုထုတ်လုပ်မယ့်မှတ်တမ်းတင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ customers.If များအတွက်လျှပ်စစ် actuator turn တည်ထောင်ရန်ဆက်လက်တိုးတက်စေရန်မည်, e-mail ဖြင့်ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ [email protected] ။
ပိုကောင်းတဲ့အထူးသဖြင့် AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာ, ဂျာမနီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH အတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် မလေးရှား ASIA မှရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်, လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သည့် AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးခင်မှာ3။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
မေး: သင်ငါ့ကို AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတပုံအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်သလားလျှပ်စစ် actuator turn?
Q: သင့်ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းလေးပုံတပုံတစ်ခုအမိန့်များနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သလဲ?
ဖြေအများအားဖြင့်ကျနော်တို့ရှန်ဟိုင်းနှင့် Ningbo ဆိပ်ကမ်းမှတင်ပို့မည်
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်